Bhiridhadhi anotaura kechitatu (1-6)
‘Munhu angava sei akarurama pamberi paMwari?’ (4)
Anoti kuperera kwemunhu hakuna zvakunobatsira (5, 6)
25 Bhiridhadhi+ muShuhi akapindura achiti: 2 “Kutonga uye simba rinotyisa ndezvake;Anoita kuti kudenga* kuve nerugare. 3 Mauto ake anoverengeka here? Ndiani asingabudirwi nechiedza chake? 4 Saka munhuwo zvake anofa angava sei akarurama pamberi paMwari,+Kana kuti munhu akazvarwa nemukadzi angava sei asina mhosva?*+ 5 Kunyange mwedzi hauna kujekaUye nyeredzi hadzina kuchena pamberi pake, 6 Ko kuzoti munhuwo zvake anofa, honye zvayo,Uye mwanakomana wemunhu, gonye zvaro!”
^ ChiHeb., “kunzvimbo dzake dzakakwirira.”
^ Kana kuti “akachena.”